> Resource > Camera > Sidee inuu ka soo kabsado Faylal ay ka Digital fiidiyo ama Voice taariikhqorihii
1. videos istareexa ku tirtiray ka fiidiyo Flip daahir ah, ee ma suuroowdaa jid inuu ka soo kabsado videos ka taariikhqorihii Flip?
2. Tirtiraa xog muhiim ah oo ay si qalad ah ku JVC Everio oo aan dib-u helin mar dambe karo, sida loo iyo si kasta oo ay sameeyaan heli kabashada xogta Camecorder ?
3. Taariikhqorihii Digital ama qalad kaadhka xusuusta fiidiyo . doonaysaa in ay helaan faylasha card SD via Zoom oo taariikhqorihii ahaa Handy oo aad ka codsaday in marka hore qaab. Ma suurogalbaa in la sameeyo dib u soo kabashada oo taariikhqorihii cod ?
4. Dhaco riix Delete ama button Qaabka on taariikhqorihii ahaa digital iyo kuwa video qaali ah, cajalado maqal ah oo dhan tageen. Fursad kasta oo ay sameeyaan fiidiyo video kabashada ?
Wax First hore , marka aad si qalad ah la kulmo mid ka mid ah dhibaatooyinkaas, ha isticmaalin oo taariikhqorihii ahaa digital cod ama fiidiyo ugu qaadan cajalado ka badan, midna waa in aad isku daydo inaad dhigay xogta cusub kaadhka xusuusta aad taariikhqorihii digital ah. Waayo, tirtiray audio iyo video files ma baabi'i si joogto ah isla markiiba, haddii ay overwritten by xog cusub. Overwriting ka dhigi doonaa weligiis iyo unrecoverable tirtiray.
Markaas sida inuu ka soo kabsado files tirtiray ? Waa inaydaan samayn karaa iyada oo aan kaalmo ka mid ah qalab kabashada xogta. Habka ugu fiican waa in ay isku dayaan barnaamij soo kabashada xogta xirfadeed oo la isku halayn karo. Dabcan, waa in laguu ogolaado in aad dib u soo ceshano tirtiray videos iyo music in aad laga badiyay.
Haddii aad isticmaalayso Windows, Wondershare Photo Recovery noqon doonaa doorasho xaq. Ma ahan oo keliya barnaamijka sawir, laakiin sidoo kale soo kabanayo videos iyo audio tirtiray ka warbaahinta dhijitaalka ah oo ay ku jiraan taariikhqorihii cod iyo fiidiyo.
Haddii aad isticmaalayso Mac, ka dibna u leexdo xagga Wondershare Photo Recovery for Mac . Waxa kale oo ay soo kaban karto, videos, ama audio music.
Fiiro gaar ah: In si ay u qabtaan guul video ama kabashada files audio ka duubista ama fiidiyo, si fiican loo badbaadiyo files soo kabsaday si disk kale.
Step1. Connect duubista si kombiyuutarka
First xiriiriyaan duubista ama fiidiyo ugu computer ah, si fiican via cable dekedda USB ah haddii aad qalabka ku xiran yihiin la drive adag, ama isticmaal akhristaha kaarka haddii ay jiraan kaadhka xusuusta ama soo shirtagi gudaha sida ay tahay amaan. Markaas aan bilowno barnaamij oo guji "Start" si ay u bilaabaan.
Step2. Dooro duubista si scan.
Step3. Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan audio, video, sawiro ka duubista.
Fiiro gaar ah: Ha mar badbaadin xogta soo kabsaday kaadhka xusuusta asalka ah. Raadi meel kale, waayo, sida kombiyuutarka ama disk kale oo bannaanka ah, si loogu tixgeliyo ammaanka.
Video tutorial ah camera digital ah ama soo kabashada taariikhqorihii voide